Mpitrandraka diesel an-dranomasina
Fitaovana 5 800KW Walter-Cummins Generators tonga any Angola
Fotoana fandefasana: 05-31-2021
Na dia andro fahavaratra mafana aza, tsy mahasakana ny hafanam-pon'ny olona Walter amin'ity asa ity. Nandeha nankany amin'ny tranokalan'i Angola ireo injenieran'ny sidina mba hametraka sy hanao debug, ary hampianatra ireo mpiasa ny fomba fampiasana set generator amin'ny fomba marina. Vao tsy ela akory izay, vondrona 5 800KW Walter andian-dahatsoratra Cummins mpamorona mametraka eq ...Hamaky bebe kokoa »
Tonga ao amin'ny Jingdong Logistics Park ireo setan'ny mpamokatra diesel Walter 1200KW
Fotoana fandefasana: 02-25-2021
Tamin'ny 23 Novambra 2019, nifindra tao amin'ny Jingdong Logistics Park ireo singa roa an'ny orinasa 1200kw Yuchai. Fantatra tsara fa, JD.com dia orinasa e-varotra miasa any Sina. Ny mpanorina Liu Qiangdong dia talen'ny talen'ny JD.com. Manana ny JD Mall, JD Finance, Paipa.com, JD ...Hamaky bebe kokoa »
Tonga tany amin'ny Nosy Solomon ny injenieranay
Fotoana fandefasana: 05-13-2020
Vao tsy ela akory izay, ireo injenieran'ny laharana voalohany an'i Walter dia tonga tao amin'ny Nosy Solomon hanangana milina fanaovana debugging, mba hahafahan'ny mpamokatra gasoil rehetra hatao ao anaty asa isan'andro faran'izay haingana. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nividy générique 2 Volvo 500KW diesel mpanjifa mpanjifantsika vahiny sy génie 1 Volvo 100KW diesel gen ...Hamaky bebe kokoa »
Tongasoa ny mpanjifa ejiptiana any amin'ny orinasa misy anay
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny orinasa sy ny fanavaozana mitohy ny teknolojia R&D, Yangzhou Walter Electrical Equipment Co., ltd koa dia nanitatra hatrany ny tsenany iraisam-pirenena ary nahasarika ny sain'ny mpanjifa vahiny maro. Ny 7 jona 2018, ny ...Hamaky bebe kokoa »
Generator 1000KVA Yuchai ho an'i Filipina
Ny volana jona 14th 2018 dia manondrana mpamokatra herinaratra 1000kva ho any Filipina izahay, fanintelony izao ny orinasantsika nanondrana entana ho any Filipina amin'ity taona ity. Ny mpiara-miasa aminay dia manana mpiara-miasa marobe eto Filipina, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia niara-niasa tamin'ny mpanorina trano any Manila izahay. Te hividy 1000kva izy ...Hamaky bebe kokoa »
Diesel Generator, Perkins Generator 500kva, Generator Diesel Generator mangina, Perkins 500kva Diesel Generator, Super Silent Diesel Generator, 60hz Silent Perkins800kva Diesel Generator,